OUKITEL waxay ku soo bandhigeysaa xarunteeda cusub taleefannada MWC | Androidsis
OUKITEL waa mid ka mid ah noocyada badan ee laga helo MWC 2019. Munaasabadan oo ka dhacday magaalada Barcelona ayay shirkaddu ku soo bandhigtay qaar ka mid ah taleefannada casriga ah ee casriga ah, kuwaas oo lagu bilaabi doono dukaamada toddobaadyada soo socda. Moodooyinka aan awoodnay inaan ku aragno dhacdada waxaa ka mid ah K9 iyo K12, oo ah laba ka mid ah moodooyinka cusub ee noocyadan ka yimid soosaaraha Shiinaha.
Iyaga oo ay weheliyaan, OUKITEL waxay sidoo kale nooga tageen C13 Pro iyo C15 Pro.Sidaa darteed maalmahan waxay soo bandhigayeen astaamo badan oo cusub, kuwaas oo Waxay ballanqaadeen inay suuqa kusoo gaari doonaan muddo gaaban adduunka oo dhan
Astaantu waxay ka warqabtaa isbeddelada suuqa. Waxaan ku arki karnaa moodooyinka cusub ee OUKITEL K kala duwan. K9 waxay la timid shaashad ballaaran, 7,12 injiinno leh qaanso-biyood u eg. Gudaha gudaheeda waxaan ka helaynaa 6.000 mAh baytari ah oo shaki la'aan siin doonta madax-bannaanidooda. Intaa waxaa dheer in si dhakhso leh loogu soo oogo. Qaabkan waxaa laga bilaabi doonaa dukaamada bisha May.
OUKITEL K12 wax badan ayaa ka siman moodeelka kale. Xaaladdaada, waxay ku imaaneysaa shaashad 6,3-inji ah oo leh xallinta Full HD +. Telefoonka gadaashiisa wuxuu ka sameysan yahay maqaar. Batarigiisu waa weyn yahay, oo awooddiisu tahay 10.000 mAh, marka lagu daro inuu leeyahay lacag degdeg ah, sida ay xaqiijisay shirkadda.
Dhinaca kale waxay nooga tagayaan nooc kale oo cusub, oo ah OUKITEL C. Dhexdeeda waxaan ku leenahay C13 Pro, kaas oo la socda shaashad dhan 6,18-inch oo leh darajo. Gudaha waxaan ka fileynaa processor-ka MediaTek MT6739, 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo keyd ah, oo aan ku ballaarin karno illaa 64 GB. Batariga waa 3.000 Mah oo waxaan haysanaa kamarad hore oo 5 MP ah. Waxay ku timaaddaa Android Pie asal ahaan.
Qaabka kale ee noocan ah waa OUKITEL C15 Pro. Waxay leedahay shaashad cabirkeedu yahay 6,088 inji, oo lagu xallinayo 1280 × 600 pixels. Xaaladdan oo kale waxay isticmaashaa processor-ka MediaTek MT6761, oo ay weheliso 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo keyd ah. Kaamirooyinka gadaal waa laba lenses 8 MP ah dhanka horena waxaa ku yaalo 5 MP. Waxay yeelan doontaa batari 3.200 mAh ah iyo waliba hooyo u dhalatay Android 9.0 Pie.
Goor dhow waxaan heleynaa xog cusub oo ku saabsan soo bandhigida taleefannadan. In kasta oo inbadan la ogaado waxaad booqan kartaa bogga shirkadda, halka ay macquul tahay in lala socdo wararka oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OUKITEL waxay taleefannadeeda cusub ku soo bandhigeysaa MWC